Maroodiga Olive ee Iskujira Hilibka 8239 Madadaalada Madow, Shiinaha Olive Maroodiga Iskujira Iskudhafka Soosaarayaasha Daahyada Madadaalada, Shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Number Model: 8239
MIDABOOYIN KOOBAN & TAYO PREMIUN - Ku jooji iftiinka qoraxda iyo falaadhaha UV ee waxyeellada leh daahkan dabka madow. Daah-ka-madoobaadka qolka ayaa ka caawinaya inuu qolka jiifka si aan mugdi lahayn u ilaaliyo — oo ku habboon hurdada galabnimada ama hurdada subaxa hore Dharka laftiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan adduunka. Muuqaalka xarrago leh, waxay ku siineysaa jawi raaxo leh oo raaxo leh qolka.
NOOCA XIRIIRKA & GARGAARKA CAADIGA AH EE KHILAAFKA - daah madow ayaa ah wax ku habboon gurigaaga. Daahyadayada kuleylka kuleylka leh waxaa lagu heli karaa cabbiro kala duwan iyo midabbo hodan ah. Daahyadaan xiraya daahyada ayaa raacaya qaabka ugu yar ee casriga ah. Waxyaabaha lagu xushay tayada, oo aan lahayn heersare aan sinnayn, iyo xakamaynta tayada adag ee waayo-aragnimada wax soo saarka ka wanaagsan.
Gacmo dhaqid ama mashiin lagu dhaqi karo (Wareeg jilicsan) .Fedhid degdeg ah ama uumi nadiifi haddii loo baahdo. Ha ku caddeynin wax biyo ah. Ku maydh biyo qabow.